कक्षा १२ का किशोर गाउँकी केटीसँग उनकै घरमा रंगेहात समातिएपछि गाउँलेहरुले…. – Taja Khawar
कक्षा १२ का किशोर गाउँकी केटीसँग उनकै घरमा रंगेहात समातिएपछि गाउँलेहरुले….
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०५, २०७८ समय: १९:३९:०३
काठमाडौं । एक कक्षा १२ को विद्यार्थीलाई गाउँलेहरुले हातपात गरेर ज्यान लिएका छन् । किनभने उनी घरमा एक केटी संग रंगेहात भेटिएका थिए ।
यो घटना त्रिपुराको एउटा गाउँको हो । वास्तवमा १२ कक्षामा पढ्ने केटा गाउँकी एउटी केटीको प्रेममा परेका थिए । घटना भएको दिन, उनी युवतीलाई उनको घरमा भेट्न गएका थिए ।
यसै बीच, केटीको परिवारले उनलाई समाते र गाउँलेहरुसँसंग मिलेर हातपात गर्न थाले । गाउँलेहरुले हातपात गरेपछि उनको मृत्यु भयो । प्रहरी अनुसन्धानमा यो पत्ता लागेको छ कि केटा र केटी पहिले धेरै पटक भेटिसकेका थिए र केटीका परिवारका सदस्यहरु पनि यस बारे जान्दथे ।
प्रहरीका अनुसार केटीको परिवारका सदस्यहरुले यस अघि पनि केटालाई हातपात गरेका थिए । घटनाको बारेमा जानकारी प्राप्त भएपछि, प्रहरीले केटीको परिवारका सदस्यहरु सहित केहि गाउँलेहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
मृतक किशोरका काकाले प्रहरीलाई भने कि उनलाई केही गाउँलेहरुले फोन गरेर भतिजलाई गाउँलेहरुले हातपात गरी रहेको बताएका थिए । यो जानकारी पछि उनी तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेर उनले आफ्नो भतिजालाई गाउँलेहरु बाट बाहिर निकाल्ने कोशिश गरे तर गाउँलेहरुले गर्न दिएनन् ।
गाउँलेहरुले ति किशोरलाई निरन्तर हातपात गरिरहेका थिए । त्यसपछि उनले घटना बारे प्रहरीलाई जानकारी गराएका हुन्।घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले गम्भीर घाइते किशोरलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गर्यो, डाक्टरहरुले उनलाई मृत घोषित गर्दिएका हुन् ।
Last Updated on: August 21st, 2021 at 7:39 pm
३७२३ पटक हेरिएको